Asan-dahalo any Sofia: ahiana ny olobe ao ambadik’i Jerison - ewa.mg
Asan-dahalo any Sofia: ahiana ny olobe ao ambadik’i Jerison
News - Asan-dahalo any Sofia: ahiana ny olobe ao ambadik’i Jerison
Velon-taraina ka tonga eto
an-dRenivohitra ny solontenan’ny mponina, manoloana ny asan-dahalo,
tarihin’i Jerison any Sofia. “ Miantso ny filoha Rajoelina, mba
jereo ny mahazo anay. Tena foto-pivelomanay ny omby nefa potika
izany noho ny asan-dahalo tarihin’i Jerison. Ahinay fa misy olobe,
mpitantana na olom-boafidy ao ambadik’izy ireo”, hoy ny
solontenan’ny mponina, ahitana an’i Falizara Stephanot,
Rabemananjara Elmi ary Limbirazana Luc, tetsy Antanimena, omaly.
Efa nisy ny ezaka sy ny dingana natao : vondron-tobin’ny zandary,
ny prefet, ny governora, ny depiote sy ny maro hafa. Mijanona ho
fampanantenana ihany izany. “Tsy nahitana vahaolana matotra.
Tsy mbola voasambotra i Jerison nefa efa an-taonany maro ny tsy
fandriampahalemana”, hoy izy ireo.
Mihorohoro tanteraka ny mponina,
manoloana izany. Mandeha avokoa ny ramatahora ataon’I Jerison sy
ireo namany. “Efa ahitana ny ekipany avokoa ny any Antsohihy,
Bealanana, Port Berger, Mampikony ary efa voafehiny tanteraka
izany. Nametra-pialana hatramin’ny sefo fokontany noho ny tahotra
valifaty”, hoy ihany izy ireo. Na izany aza, anisan’ny
vahaolana natsidik’izy ireo ny hidiran’ny andian-tafika mahery
vaika na hetsika manokana hatao any anaty ala any, hanenjehana ity
dahalo rain-dahiny ity.
L’article Asan-dahalo any Sofia: ahiana ny olobe ao ambadik’i Jerison a été récupéré chez Newsmada.
Nanokafan’ny mpitandro filaminana fanadihadiana ny tranga fitifirana, izay nahafaty lehilahy ka mahavoatonona ny kaporaly iray tany Mahabo-Amboasary Atsimo, afak’omaly. Nanome toromarika amin’ny fanokafana famotorana ny Fitsarana any an-toerana na dia tsy nametraka fitoriana aza ny havan’ilay lehilahy maty satria nanao raharaham-pihavanana tamin’ny lehiben’itsy miaramila voarohirohy itsy ireo tompo-manjo. Fahitana balana basim-borona no niaingan’ny vono olona. “Lehilahy iray nahita balana basimborona teo akaikin’ny tranony, tany Mahabo, no nampiseho izany tamin’ny namany, afak’omaly maraina. Teo am-piresahana izy roa lahy no nandalo ny miaramila roa avy ao amin’ny Rezimanta voalohany ao amin’ny faritany miaramila fahadimy, any Toliara. Nanadihady momba an’io bala io ny iray tamin’ireo miaramila. Ny namany kosa nisambotra an’ ilay lehilahy faharoa sady nitarika azy hiaraka amin’izy ireo”, araka ny fampitam-baovao avy any Amboasary Atsimo. Taorian’izay no nitranga ny tsy nampoizina rehefa nilaza ny haka ny entany tao amin’ny trano iray tsy lavitra teo io lehilahy faharoa io. “Voatifitra avy aoriana izy. Loakan’ny bala ny lamosiny. Tsy avotra ny ainy na dia nentina tany amin’ny toeram-pitsaboana fototra faharoa tao an-toerana aza”, hoy ny fanampim-panazavan’ny mpitandro filaminana mandray an-tanana an’ ity raharaha ity. Arahina ny tohin’ny famotorana an’izao raharaha izao, araka ny toromarika avy amin’ny Fitsarana, any Ambosary Atsimo. Araka ny efa nohamafisin’ny jeneraly Rabenaivoarivelo Jean Claude, lehiben’ny Etamazaoron’ ny tafika dia: “tsy maintsy misy famotorana ampanaoviny amin’ ireny tranga maha voatonontonona miaramila ireny”. L’article Tifitra tao an-damosina :: Kaporaly enjehin’ny Fitsarana noho ny famonoana olona est apparu en premier sur AoRaha.